Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. संयुक्त राष्ट्रसंघ बैठकमा कश्मीरका विषयमा छलफल – Emountain TV
एजेन्सी, ३२ साउन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको अनौपचारिक बैठकमा कश्मीरका विषयमा छलफल भएको छ । परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकमा भारतीय संविधानको धारा ३७० सरकारले निष्प्रभावी बनाएपछिको अवस्था बारे छलफल भएको हो ।
पाकिस्तानले भारतीय कदमको विरोध गर्दै सुरक्षा परिषदलाई चिट्ठी लेखेपछि यो अनौपचारिक बैठक भएको हो । बैठकमा भएको छलफलका बारेमा स्पष्ट जानकारी या औपचारिक जानकारी आएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतीय राजदूत सैयद अबरुद्दीनले धारा ३७० सम्बन्धी विषय आन्तरिक मुद्दा रहेको र यसमा बाहिरका देशको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । उनले पाकिस्तानले हिंसाको कुरा गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
सुरक्षा परिषदले यो विषयमा दुई देशले वार्ता गरेर मिलाउनु पर्ने विचार दिएको बताइएको छ । तर चीनले भने यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार नै समाधान गर्नु पर्ने बताएको छ ।
कश्मीरको अवस्था कमजोर रहेको चीनको भनाई छ ।बैठकमा चीनका राजदूत झाङ्ग जुनले कश्मीरमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेकोले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।